Foto dị Iweghachite Software naghachi ehichapụ Pictures maka Win & Mac
> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ / Lost Pictures
Ọ ga-agbake furu efu foto?
E nwere kwesịghị n'etiti ndị mmadụ na foto ozugbo na-ehichapụ / formatted / furu efu, ha na-efu ruo mgbe ebighị ebi. N'ezie, ọ bụ ihe ọjọọ. Mgbe ị na mmadụ na mberede ihichapụ / fotmat foto mmadụ na mberede ma ọ bụ ụma, ndị furu efu foto na-adịghị ehichapu-adịgide adịgide. Ha ka na-echekwara na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ nke ha emi odude n'ihu. Ha bụ nnọọ bụghị inweta ma ọ bụ anya. Ka ogologo dị ka foto na-adịghị overwritten, ọ bụ maa ga-esi nweta ha azụ na foto mgbake software.
Pro-iji ga-atụle nke a zuru foto mgbake
Aka na ihe ịga nke ọma foto mgbake, i kwesịrị ịtụle ndị na-esonụ pro-nzọụkwụ.
> Ozugbo kwụsị iji disk ma ọ bụ ngwaọrụ nke e dere na-ehichapụ / formatted / furu efu
foto.> Edela ma ọ bụ chekwaa ọhụrụ ọ bụla data na disk ma ọ bụ
ngwaọrụ.> Chọọ maka a pụrụ ịdabere na-agụ-nanị dijitalụ foto mgbake software.
Olee otú iji họrọ kasị mma foto mgbake software?
Safety mbụ: The foto mgbake software kwesịrị ịgụ-na-na-abụghị-ebibi ihe. Ọ dịghị ihe ọ bụla damge gị foto.
Nchekwa na ngwaọrụ: The dijitalụ foto mgbake software kwesịrị akwado mgbake si disk ma ọ bụ ngwaọrụ ebe ị furu efu gị photos, dị ka kọmputa, mpụga ike mbanye, na ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, USB mbanye, Memory Stick, wdg
Foto dị Loss atụ: Foto dị ọnwụ nwere ike ime n'ihi na usoro, nhichapụ, virus inflection, usoro nrụrụ aka, ike ọdịda, na ndị ọzọ na ọnọdụ. Lelee foto mgbake software ị selecte-akwado nke a.
Preview tọmbneelụ: Lelee ọ bụrụ na ọ-enye gị ohere ịhụchalụ foto tupu mgbake. Preview na-agwa gị ma ndise mgbake software nwere ike ịhụ azụ gị furu efu photos.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ otu nke kasị mma foto software nke dakọtara niile na ọnọdụ n'elu, a pụrụ ịdabere na na nchebe. Ị nwekwara ike chọta azụ furu efu vidiyo na ọdịyo faịlụ na ha.
Free download, wụnye na ẹkedori foto mgbake software maka Win / Mac dị nnọọ dị ka sistemụ arụmọrụ gị.
Atụmatụ: Adịghị wụnye Wondershare Photo Recovery na otu nkebi ebe ị furu efu data maka ezere overwriting mbụ data.
Olee otú Naghachi Pictures na Foto dị Iweghachite Software
Ebe a na-ewe Wondershare Photo Recovery maka Windows dị ka ihe atụ.
1. The scanning oge na-adabere na nke mgbake mode họrọ.
2. Ị nwere ike "cheretụ" ma ọ bụ "Kwụsị" Doppler ke ufọt ufọt usoro. Maka nsonaazụ kacha mma, ị kwesịrị ị na-ekwe ka Doppler iji wuchaa.
3. Ị nwere nhọrọ ịzọpụta gara aga Doppler results maka na-aga n'ihu foto mgbake n'oge ọ bụla na-enweghị rescanning.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake foto gị
Chọpụta lekwasịrị data na ị chọrọ iji naghachi. Pịa 'Naghachi' gaba ebe nhọrọ interface. Ma ọ bụ pịa "Back" laghachi na nkebi nhọrọ interface.
Files nwere ike ota site aha, size, kere na gbanwetụrụ ụbọchị.
Nzọụkwụ 3. Họrọ a ebe ịzọpụta recoverable data.